I 5 Makero eEconomy
Geography Urban Geography
Hurumende yenyika inogona kugoverwa mumapoka akasiyana-siyana kuti ijekese chikamu chevanhu vanobatanidzwa mubasa remuitiro. Iyi nhengo inoonekwa sekuenderera mberi kwemashure kubva kune zvakasikwa. Kuenderera mberi kunotanga nebasa guru rezvemari, iro rinozvibatanidza nekushandiswa kwezvinhu zvakasikwa kubva panyika zvakadai sekurima uye kumigodhi. Kubva ipapo, kureba kubva kune zvigadzirwa zvepasi zvinowedzera.
Nzvimbo huru yehupfumi inotsvaga kana kukohwa michina kubva pasi, zvakadai sezvinhu zvakasikwa uye zvokudya zvekudya. Mabasa anobatanidzwa nebasa guru rezvemari rinosanganisira zvekurima (zvose zvekuchengetedza uye zvekutengeserana) , kumigodhi, masango, kukura , kufudza, kuvhima nekuunganidza , kubata hove nekukanda. Kuiswa uye kushandiswa kwezvinhu zvakagadziriswa zvinoonekwawo kuti chikamu chesezvikamu.
Munyika dzakabudirira uye dzichiri kusimukira, kuwedzera kwevashandi kunowanikwa munharaunda yekutanga. Kunenge 2 muzana yevashandirwi veUnited States vanobatanidzwa mubasa rekutanga remabasa nhasi, kuderera kunoshamisa kubvira pakati pezana remakore rechi19 apo zvinopfuura zviviri zvezvitatu zvevashandi vaiva vashandi vekutanga.
Inzvimbo yezvemari yehupfumi inogadzira zvigadzirwa zvakapera kubva pane zvigadzirwa zvakabudiswa nehupfumi hwekutanga. Zvose zvinogadzirwa, kushandiswa, nekuvaka zviri mukati mechirongwa ichi.
Mabasa anowanikwa nedzimwe nyika anosanganisira kushandiswa kwesimbi uye smelting, kugadzirwa kwemotokari, magetsi ekugadzira, makemikari uye inyanzvi emhizha, kushandiswa kwemhepo, magetsi uye mabhodlers, kuvaka uye kuvaka zvikepe.
MuUnited States, zvishomanana pasi pe20 muzana yevanhu vanoita basa vanobatanidzwa mune zvekuita sekondari.
Inzvimbo yepamusoro yehupfumi inozivikanwawo semabhizimisi emabasa. Ichi chikamu chinotengesa zvinhu zvakagadzirwa nedzimwe chikamu uye inopa hutano kune vese vanhu vazhinji uye kumabhizimisi mune zvese zvishanu zvemari.
Mabasa anobatanidzwa neizvi zvinosanganisira zvekutengesa uye kutengesa kwekutengesa, kutakura nekuparadzira, maresitorendi, mafundisi, vehupfumi, zvekushanyirwa, inshuwarheni, mabhengi, hutano hwehutano, uye mutemo.
Munyika dzakawanda dzakabudirira uye dzichiri kusimukira, chikwata chiri kukura chevashandi chinozvipira kumatunhu makuru. MuUnited States, inenge 80 muzana yevashandi vashandi vepamusoro.
Kunyange zvazvo huwandu hwehupfumi huri kugovana chete hupfumi muzvikamu zvitatu, vamwe vanouparadzanisa muzvikamu zvina kana zvishanu. Aya mapoka maviri ekupedzisira anonyatsobatanidzwa nehutano hwemashure edzidzo. Mune mienzaniso iyi, iyo quaternary sector yehupfumi inosanganisira mabasa echidziro anowanzobatanidzwa nehutaneti innovation. Iko dzimwe nguva kunonzi hupfumi hwekuziva.
Mabasa anobatanidzwa nehutachipiri anosanganisira hurumende, tsika, mabhuku, mabhizinesi, tsvakurudzo yesayenzi, dzidzo uye teknolojia yekuziva. Aya mazano eunyanzvi nemabasa ndizvo zvinotungamirira kufambira mberi kwekambaniki, izvo zvinogona kuita zvakanyanya mukukura kwenguva pfupi uye kwenguva refu.
Dzimwe nyanzvi dzezvemari dzinowedzera kuparadzanisa chinonzi quaternary sector muchikwata che quinary, iyo inosanganisira zvikamu zvakakwirira zvekuita musarudzo munzanga kana hupfumi. Izvi zvinosanganisira vatungamiri vepamusoro kana vatungamiri mumamiriro ezvinhu akadai sehurumende, svesa, masayunivhesiti, vasina ruzivo, hutano hwehutano, tsika netsika. Inogonawo kusanganisira mapurisa uye madhipatimendi emoto, ayo ari masangano ehurumende asi anopesana nemabhizimisi emari.
Economists dzimwe nguva dzinosanganisira mabasa epamba (mabasa anoitwa mumusha nemunhu wemhuri kana kuti anovimba naye) mumutambo wezvinyorwa. Zvinhu izvi, zvakadai sokuchengetwa kwevana kana kuchengetwa kweimba, hazvisi kuyerwa nemari yemari asi zvinowedzera kuhupfumi kuburikidza nekupa mahara ehurukuro iyo ingadai yakabhadharwa.
Geography yeKapa Town, South Africa
Mutemo weGuta rePemate
Kusarura Rudzi uye Kubatanidzwa
Rwendo rweMaguta Makuru KuIndia
Chirongwa Chekuchengetedzwa Kwezvakaitika Kare
Geography yeMoscow, Russia
Kuenzanisa Guta muUnited States uye Canada
Pacific Rim uye Economic Tigers
Maguta Makuru Mune Nyika
Nhoroondo yeWalter Gropius
Nhoroondo uye Tsanangudzo yeSolar Cell
Hassium Facts - Hs kana Element 108
Nhungamiro yeBallet yevana neVabereki
Kuita Mapuriti Anokumbira muSpain
Top Books: The Balkans
Geography uye Kubatana kweHaiti
Top 5 Nhema pamusoro pevaJudha nechiJudha
Xenophobia muUnited States
Spain uye Mitemo Mitsva ye1542
Kurwisa Foggy Glasses
Chii Chinonyanya Kuoma Chemistry Class?
Top Top 10 Mufaro Unogara Uchitevera Rudo Rwiyo
Kuwedzerwa uye Kuwedzerwa Printable
Kuva Bat Mitzvah
Nhoroondo yeOlympics ye1976 kuMontreal
MUTA WOKUTAURA MUTAURO Kuenzaniswa kweKubvuma kuColor Colleges